Wednesday May 08, 2019 - 09:18:37 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warbixin cusub oo ay soo saartay wasaarada arrimaha Difaaca ee Mareykanka (The Pentagon) ayaa lagu sheegay in weerarada ciidamada Mareykanka ee sanadkii lasoo dhaafay ee 2018-kii ka dhacay wadamada Ciraaq, Afghanistan, Suuriya iyo Soomaaliya lagu dil
Warbixin cusub oo ay soo saartay wasaarada arrimaha Difaaca ee Mareykanka (The Pentagon) ayaa lagu sheegay in weerarada ciidamada Mareykanka ee sanadkii lasoo dhaafay ee 2018-kii ka dhacay wadamada Ciraaq, Afghanistan, Suuriya iyo Soomaaliya lagu dilay ugu yaraan 120 ruux oo shacab ah, lagu dhaawacay 65 kale.
iyadoona tira koobkaas ay lafajaceen in badan oo ka mid ah warbaahinnada, qorayaasha iyo dadka ku xiran baraha bulshada ee isha ku haya gummaadka ba’an ee Mareykanka uu ka wado dalalkaasi.
Warbixinta oo ka kooban 20 Page ayaa ah Warbixin sanadle ah oo uu amray golaha Congresska ee Mareykanka taas oo sanad waliba ay wasaaradda gaashaandhigga u gudbiso aqalka Congresska.
Wasaarada gaashaandhiga ee Mareykanka ayaa sheegtay in cadadka sanadkii lasoo dhaafay uu aad kaga yaraa dadkii ay laayeen sanadkii 2017-kii, kolkaas oo ay qirteen dad gaaraya ilaa 800 oo ruux, Iyadoo sidoo kalena sheegtay in gabi ahaanba uusan jirin wax dad shacab ah oo ay ku dileen wadamada Yemen iyo Liibiya oo ay ka fuliyaan duqeymo wuxuushnimo oo ka dhan ah dadka shacabka.
Warbixintan kasoo baxday wasaarada difaaca ee Mareykanka ayaa gabi ahaanba ah mid khilaafsan warbixinnadii ugu dambeeyey ee ay hay’adaha reergalbeedka kasoo saareen duullaanada Mareykanka ee dibadda iyo khasaaraha ka soo gaara dadka shacabka ah.
Hay’adda Amnesty International ayaa warbixin ay soo saartay bishii April ee lasoo dhaafay ku sheegtay in ciidamada Mareykanka ay gudaha Suuriya oo kaliya ku dileen dad gaaraya ilaa 1,600 oo askari labadii sano ee ugu dambeysay.
Halka hay’ad kale oo lagu magacaabo UNAMA oo ka howlgasha Afghanistan ay iyaduna warbixinteedii ugu dambeysay ku sheegtay in ciidamada Mareykanka iyo xulifadooda ay dalkaasi ku dileen ugu yaraan 1,185 ruux oo shacab ah.
Warbixinta Pentagon-ka ayaa sidoo kale ku doodeysa in sanadkii la soo dhaafay ay ciidankooda Soomaaliya ku dileen kaliya 2 ruux oo shacab ah, iyadoo sheegashadaasi ay tahay xitaa ka hor imaaneysa tirakoobka ay sameeyeen hay’adaha reergalbeedka.
Warbixintii ugu dambeysay ee hay’adda Amnestay waxaa lagu soo bandhigay magacyada ugu yaraan 14 ruux oo shacab ah oo lagu dilay duullaanada ay ciidamada Mareykanka ka fuliyeen kaliya wilaayada Sh/hoose.
Mar wazaarada difaaca la weydiiyey farqiga u dhexeeya qiimeyntooda iyo mida hay’adahan ayey ku sheegeen in farqiga uu yahay sida loogu kala aragti duwan yahay qiimeynta khasaaraha iyo cida shacab loo arko iyo cida aan loo arag.
Madaxweynaha dowladda Mareykanka ninka lagu magacaabo Donald Trump ayaa sanadkan joojiyay xeer sirdoonka Mareykanka farayey in ay soo gudbiyaan khasaaraha shacabka kasoo gaaraya duqeymaha iyo weerarada ciidamada Mareykanka ee ka dhacaya daafaha dunida, tan iyo markaasna military-ga Mareykanka ayaa kordhiyey weerarada wuxuushnimo ee ka dhanka ah dadka Muslimiinta ee ku nool wadamada uu ku soo duulay.